बार्सिलोनामा के गर्ने भन्ने बारे सुझावहरू - 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: Notre-Dame लाई एक श्रद्धांजलि
अर्को पोस्ट: सातौं महाद्वीप
पोष्ट गरिएको 30 जुलाई 2019 द्वारा रोमोमो लुकाना
बार्सिलोना असाधारण वास्तुकला मन पराउनेहरूका लागि उत्कृष्ट छ।
तल सूचीबद्ध साइटहरूका अनुहार र भित्री वास्तविकता कुनै पनि आगन्तुकलाई अद्वितीय र वर्ग को बाहिर अनुभव दिन्छ।
यदि यो बार्सिलोनाको तपाईंको पहिलो यात्रा हो भने यी सल्लाहहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
तपाईंले याद गर्नु भएको पहिलो कुरा बार्सिलोनामा तिनीहरू स्पेनिश बोल्दैनन्, क्याटालान तिनीहरूको आधिकारिक भाषा हो।
पोर्चुगिज भाषा सिक्नेहरूका लागि भाग्यशाली, किनकि चिन्ह र लेनहरू पोर्तगालीसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ र यदि तपाईंलाई थाहा छ पोर्तुगालीलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ, फ्रेन्च भाषा भन्दा पनि सजिलो।
त्यस्तै गरी यदि तपाइँ स्पेनिश जान्नु हुन्छ भने केटालानको पनि तपाईसँग केही सजिलो हुनेछ। सबै भाषा पछि क्यास्टेलियनको एक प्रकारको भैरहेको देखिन्छ।
2- एल प्राग एयरपोर्ट
यदि तपाईं एल प्रर्त एयरपोर्टबाट विमानबाट आउनुभयो भने कुन टर्मिनलबाट तपाईं तल झर्नुभयो, त्यहाँ2टर्मिनलहरू छन्, र हरियो बस जुन दुईलाई नि: शुल्क जोड्छ, एक 15 मिनेट जति एक टर्मिनलबाट अर्कोमा जान्छ। जहाँ बस लिइएको छ दिशाको आधारमा फरक छ। एउटा भूमिगत हुन्छ, अर्को अर्को सिंडीमा जान्छ भने, सुरक्षा गार्डसँग जानकारीको पुष्टिकरण गर्नु चाखलाग्दो छ यदि तपाईं श doubt्कामा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईं हुनुहुन्छ। भूमिगत टर्मिनलबाट छुट्ने बस पनि शहर जान्छ र तपाईं आउन र सिधै कार्यमा जान सम्भव छ, जुन शहरको केन्द्रमा छ, तपाईं बस टिकट किन्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई यही केन्द्रमा लैजान्छ। एयरपोर्ट र समयको आधारमा सिधा जादू स्रोतमा जान, यो एकदम मूल्यवान छ।
3- जादू फाउंटेन
जादुई फाउंटेन मोन्टजुइकमा छ, यदि तपाईं बेलुकी पुग्नुहुन्छ बार्सिलोना एयरपोर्टसँग एउटा बस छ जुन तपाईं पाउनुहुनेछ तपाइँलाई यसको पछि लाग्दछ, साइटमा लाइट शो र संगीत हेर्नको लागि यो रोकिन्छ। तिनीहरू अद्भुत छन् र वातावरण दर्शनीय छ। टिप भनेको केहि चाँडै आइपुग्छ र बस्नको लागि राम्रो ठाउँ खोज्नुपर्दछ। Infeप्रत्येक पर्यटक केन्द्र जस्तै हामी पनि होशियार हुनुपर्छ किनभने त्यहाँ छनौट जेबहरू छन् कि भीड र स्थानको आकर्षणको कारण अन्तमा सजिलो कार्य भयो। त्यसोभए, यदि तपाईं एयरपोर्ट बसबाट सिधा आइपुगेको सूटकेसका साथ हामीले गरिरह्यौं भनेआफ्नो सामानको ख्याल राख्नुहोस्। पर्खाल नजिक एक स्थान छनौट गर्नुहोस् जुन सुरक्षाको लागि र नाच फाउन्टेनहरू देख्न आरोहण गर्न पहिले नै मद्दत गर्दछ। स्रोतहरूमा पहुँच सित्तैमा हो र तिनीहरू 20: 00h (8: 00 pm) मा बिहीबार देखि आइतबारसम्म काम गर्दछन्।
4- प्लाआ क्याटालुन्या नजिक लुकआउट।
तपाईं नृत्य पानी कार्यक्रम हेर्न र तपाईं पहिले नै प्लाजा डे क्याटालुनियामा हेर्न चाहानुहुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै शहरको अत्यन्तै रोमाञ्चकारी दृश्यको साथ हेर्ने लायक छ जुन तपाईंसँग विभिन्न स्मारकहरू, पार्क, ठाउँहरू, र दृश्यमूलक दृश्य हुन सक्छ। त्यहाँ महल।
यो एक लिफ्ट छ कि माथि चार्ज गरिएको छ, यसले त्यहाँ व्यक्तिहरूको संख्या कम गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं माथिको नाच फाउनामा शो हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ। दुर्भाग्यवस हामीले पछि बाहिरी रूप मात्र पत्ता लगायौं र हामीले छोडेको दिनमा मात्रै गयौं, तर हेर्नु कति विशेषाधिकार हो।
5- पवित्र परिवारको Expirtory मन्दिर
वा केवल सागरडा फामिलिया चर्च, जुन गौडा स्क्वायर नजिकै छ र यसको कडाका लागि फेला पार्न सजिलो छ।
यसको वास्तुकलाले धेरै प्रभावहरू प्राप्त गर्‍यो र मुख्यत: अन्टोनी गौडेको। गोडिक शैलीमा आधुनिकतावादीसँग सामेल हुन, आफ्नै व्यक्तिगत स्पर्शको साथ अर्थात् उही स्थानको सृष्टिमा तीन सेटहरू लागू गरियो, किनकि गौडको आफ्नै शैली छ र वास्तुको निर्माणका सामग्रीहरू काम गर्न खोजेको कुरालाई ध्यानमा राख्दै। यसै कारणले सगरडा फिमेलिया एउटा यस्तो चर्च हो जुन सराहनाको योग्य छ, बाहिरबाट सुरू गरेर। यो वास्तवमै प्रभावशाली छ यसको कती विस्तृत वर्णन छ।
र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि उनीसँग टावरहरू छन् जसले4प्रेरितहरू (मत्ती, मार्क, लूका, जोन) र अर्को कुमारी मरियमको लागि र अर्को मध्ये सबैभन्दा अन्तिम र ख्रीष्टको जीवनलाई बयान गर्ने सुसमाचारको बयान गर्दछ। र त्यो किनभने हामी केवल अनुहारको बारेमा मात्र कुरा गर्दैछौं।
आर्थिक कारणहरूले गर्दा गौडाले यसलाई पूर्ण गर्न सकेन, तर यसलाई अन्य कार्यहरूमा आफ्नो सामग्रीको संरचनाको लागि प्रयोगको रूपमा प्रयोग गर्‍यो। भेट्न लायक छ।
6- बार्सिलोनाको गथिक क्याथेड्रल
अझै चर्चहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छ, त्यहाँ बार्सिलोनाको गोथिक गिरजाघर हो जहाँ तपाईं सान्ता Eulalia को चिहान सहित विभिन्न चिहानहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाँसउठ्दो कुरा हो कि कसरी पुरानो समयमा मानिसहरू अक्षरशः गिरजाघर भित्र गाडिएका थिए। यसले क्याथेड्रलको दुईवटा समारोह गर्दछ, दुबै चर्च र कब्रिस्तान। हुनसक्छ यो हराएको आत्माको मार्गनिर्देशनको एक तरीका हो, मलाई निश्चित रूपमा थाहा छैन। यदि तपाईंलाई थाहा छ कमेन्टमा छोड्नुहोस् तपाईं यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ।
7- गॉथिक क्वार्टर,
छिमेकी मध्य आकर्षणको स ma्घर्षको धेरै तिर विभिन्न आकर्षणहरू, क्याफेहरू र बारहरू भएको छ।
जे भए पनि, गोथिकको कन्ट्रास्ट तुलना गर्नका लागि यसको सिधा लाइनहरू गौडीसँग र यसको गोलाकार र रंगीन आकारहरूसँग तुलना गर्नु रोचक छ।
ठिक छ, म यहाँ धेरै नाम लिने छु, तर म सुझाव दिन्छु कि तपाईं तिनीहरू मध्ये केही छनौट गर्नुहोस्, कारण यो हो कि तपाईं पहिलोमा खुसी हुनुहुनेछ, दोस्रोमा दोहोर्याउनुहोस् र त्यसपछि थकान थोरै पिट्न सुरु गर्न सक्छ सबै भेट्न।
8- मोन्टजुइकको दृश्य
पहिलो र अनिवार्य मोन्टजुइकको दृश्य दृश्य हो। उनीसँग एउटा लिफ्ट छ, र जादुई फवाराको धेरै नजिक छ। मेरो लागि यो बार्सिलोनाको सब भन्दा दर्शनीय दृश्य थियो
9- पार्क Güell बाट दृश्य
त्यहाँ पुग्न अलि बढी गाह्रो छ, यसमा ठूलो चढाई छ र कुनै लिफ्ट छैन, तर दृश्यले हिंड्ने थकानलाई पनि क्षतिपूर्ति दिन्छ।
10- को दृश्य एरी डेल पोर्ट फेरी
यो एक केबल कार हो जुन बार्सिलोनाको पोर्ट क्षेत्र हुँदै गएको पनि भेट्न लायकको छ। विशेष गरी यदि तपाईं पोर्ट क्षेत्र नजिक हुनुहुन्छ
11- कासा बाटली,
कासा बाटली तपाईंले देखेको कुनै पनि कुरा भन्दा धेरै फरक छ, र यसको डिजाइनले गौडीको प्रभाव पनि राख्छ। जब हामी गयौं यो नविकरणका लागि बन्द गरिएको थियो त्यसैले हामी भवनको अगाडि मात्र देख्न सक्दछौं।
12- क्याम्प Nou
यदि तपाईं एक फुटबल प्रशंसक हुनुहुन्छ र आजका शीर्ष खेलाडीहरू जस्तै हुनुहुन्छ भने तपाईं क्याम्प नौमा जानु पर्छ, अझ राम्रो रूपमा चिनिन्छ बार्सिलोना स्टेडियम।
त्यहाँ तपाईं क्लबको इतिहास अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ र हेर्नुहोस् कि उनीहरूसँग टोलीमा (र अझै केही केहि तारा छन्), रोनाल्डिन्हो गाचो, लियोनेल मेस्सी र डेनियल अल्वेज, सुरेस, नेमार ज्युनियर, आदि जस्ता ताराहरूको वास्तविक तारामंडल छ। (ठीक छ, पछिल्लो एक शुटिंग स्टार हो) तर अझै उसको फुटबल छ जब ऊ खेल्न चाहन्छ।
भेट्न लायकको छ, Panoramic फोटो, तर स्टोर को मूल्यहरु केहि नुन छ, सुझाव को लागी जान छ, किन्न को लागी छैन।
11- विद्यार्थी कार्ड
यदि तपाइँ एक विद्यार्थी हुनुहुन्छ र वालेट छ भने, यसलाई यात्रामा आफूसँगै लैजानुहोस्, धेरै जसो संग्रहालयहरू र पार्कहरूमा प्रवेशका लागि छुट दिइनेछ।
12- पानीमा बचत गर्नुहोस्
प्रत्येक यात्रामा पिउने पानी महत्वपूर्ण छ। बार्सिलोनामा पैसा बचाउनको लागि टिप भनेको सहरका फोहोरहरू प्रयोग गर्नु हो, हो, त्यहाँ पिउनको निम्ति उचित फोहराहरू छन्, कहिलेकाँही तीनिहरू अलिकता लुकेका हुन्छन्, तर त्यहाँ छन्। र ती बिभिन्न स्वादका बावजुद तिनीहरू पिउन योग्य छन्। र ती झरनाहरू जस्तै छैनन्, तिनीहरू टुरिस्ट साइटको छेउमा रहेको सानो पिउने फोहोरहरू हुन्। त्यसकारण तपाईंको बोतल लिनुहोस् र फाउन्डेन्समा रिचार्ज गर्नुहोस्, यसले तपाईंलाई धेरै यूरो बचत गर्दछ र तपाईंको तिर्खा मेट्छ।
अब तपाइँ भ्रमण गर्न एक टुर बनाउन सक्नुहुन्छ: "ला सिउदाड कन्डल" (गणनाहरूको शहर) तेह्रौं र चौधौं शताब्दीमा तिनीहरूको स्वतन्त्रतामा गणनाहरूको सहभागिताको कारण। बार्सिलोना क्याटालोनिया र अरागोन राज्यको राजधानी थियो (रेनाटो अरागोन हतियारको कोट देखिएको छ?!) तर आज यो स्पेनको राज्यमा फिर्ता आयो। र त्यहाँ फेरि क्याटालोनिया स्वतन्त्र बनाउनको लागि एक नयाँ आन्दोलन छ। यदि यो सक्छ भने?
स्मृति चिन्हहरू पनि धेरै सुन्दर छन्, तर तिनीहरूले अझै पनि आफ्नो स्पेनिश पक्ष देखाउँछन्।
13- वरिपरि हुँदै:
तपाईं कहाँ पुग्नुभयो र तपाईंको अर्को गन्तव्य के आधारमा मैले यो साइट फेला पारे जुन राम्रो संगठित छ र यसमा धेरै यातायात विकल्पहरू छन् जसमा जहाजहरू समावेश छन् बार्सिलोनाबाट।
म यहाँ बुकआवे लिंक छोड्छु जहाँ अनलाईन यात्रा छोड्ने वा बिभिन्न गन्तव्यहरूमा आइपुग्दा यो धेरै सरल र सजिलो हुन्छ। तिनीहरूको ध्यान एशिया हो, तर बार्सिलोना छ रूपमा तपाईं लि as्क प्रयोग गरेर अचानक राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ:
म यहाँ छु, एक ठूलो अंगालो र अर्को पोस्ट सम्म।
यदि तपाइँ हामीलाई पछ्याउन मनपराउँनुहुन्छ भने, केवल स्क्रिनको रातो बटनमा एक ईमेल द्वारा।
कसरी बार्सिलोना बाटल्लो क्याम्प नो क्याटालोनिया एल प्रट जादू फव्वारा गोथिक पार्क गुइल पवित्र परिवार